बार्दलीबाट ओलीको दाउ : माधवको पतन - Sankalpa Khabar
बार्दलीबाट ओलीको दाउ : माधवको पतन
२ आश्विन ०७:५०
काठमाण्डौं । वालुवाटारबाट वालकोटको वार्दलीमा पुगेपछि ओलीको मन के कुरा खेलिरहेको होला ? आम मानिस मात्र होइन,एमाले कार्यकर्ता पनि अहिले यो कुरा सोच्न थालेका छन । दुइ तिहाइको सरकारको नेतृत्वदेखि फुटेको एमालेको अध्यक्षसम्म पुग्दाका ओलीको आन मान र शानमा निकै ठुलो ह्रास आएको छ । उनीसंग न हिजोको सत्ता छ न शक्ति । एकहिसावले भन्ने हो भने दाँत फुक्लेको सिंह हुन ओली । तर,यतिवेला पनि ओलीलाइ बल दिने शक्ति भनेको संसदमा रहेको संख्या नै हो । विपक्षमा रहदा पनि अझै ठुलो दल नेकपा एमाले नै हो । उनी यहि शक्तिको राप अहिले पनि सेकिरहेका छन । सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी र कुन मुद्धा कति वेला उठाउनुपर्छ भनेर जानेका ओली वालुवाटारबाट वार्दलीमा पुगेपछि एउटै ध्याउन्नमा छन,सत्ता गठवन्धन टुटाउने । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा सरकारमा रहेको अपच भएर उनी गठवन्धन टुटाउन खेलिरहेका भने होइनन । उनलाइ यो गठवन्धन यसकारण आखाको कसिंगर भएको छ कि यसमा माधव नेपाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन । उनले जिवनको अव एक मात्र लक्ष्य के लिएको देखिन्छ भने चाहे आकाश खसोस तर माधव र प्रचण्ड माथि अथाह संकट आइपरोस । यसैकारण उनी पाइताला देखिको बल लगाइरहेका छन । र,यसैको लागि उनी एमसिसिलाइ चतुरयाइपुर्वक प्रयोग गरिरहेका छन ।
केपी ओलीको राजनीतिक लाइन र जिवन हेर्दा परिणाम हेरेर वोल्ने मानिस उनी होइनन । सामान्यत वोलेका कुरामा अडिने मानिस हुन । सरकारमा रहदा उनले म्यान अफ वर्डलाइ कायम राख्न सकेनन । यतिवेला पनि एमसिसिमा उनको वोली फेरिएको जस्तो देखिन्छ । तर,खासमा ओलीको दाउ अर्कै छ । वास्तवमा ओली के चाहन्छन ?
केपी ओली यतिवेला माधव नेपाल र प्रचण्डसंग रिसले आगो भएका छन । पुष ५ मा संसद विघटन गरिसक्दा पनि शेरवहादुर देउवासंग मधुर सम्वन्ध राख्न सकेका ओली यिनै नेपाल र प्रचण्डसंग गठवन्धन गरेपछि देउवासंग पनि हल्का टाढिएका छन । उनी देउवासंग यसकारण मात्र रुष्ट छन कि उनले प्रचण्ड र माधवलाइ अंगालो हाले भनेर । यतिवेला ओलीको अर्को कुनै रणनीति नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । उनी यति मात्र चाहन्छन कि सत्ता गठवन्धन टुटोस र माधव र प्रचण्ड अलपत्र परुन । सत्ता गठवन्धनमा तिन वटा घटक वाम छन भने एउटा मधेशी दल छ र कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ । वाध्यताको यो गठवन्धन स्रोत केपी ओली नै हुन । आज वालकोटमा वसेर ओली वालुवाटार हल्लाउने कोशिश गरिरहेका छन । ओलीको राजनीतिक जित त्यतिवेला मात्र हुनेछ जब यो गठवन्धन टुटनेछ । यसकारण उनी काठ चिर्न फेसो प्रयोग गरे झैं सत्ता गठवन्धन फुटाउन एमसिसि प्रयोग गरिरहेका छन । यसकारण उनी एमसिसिमा दुइटुक जवाफ दिइरहेका छन । अर्थात एमसिसि प्रति थोरै नरम भएका छन र देउवालाइ मद्धत गर्न पनि तयार छन तर यसको लागि उनका सर्त छन । र,सर्त हो गठवन्धनका सहयात्री फेरवदल गर्ने । खासमा ओली अझै पनि देउवा गठवन्धन भत्कियोस,संसद विघटन होस र अर्लि इलेक्सन होस भन्ने नै चाहन्छन । यसो भएमा कांग्रेसले एक्लै चुनाव लडनेछ र दोस्रो दल एमाले हुन्छ अनि फुटेका अन्य दलको नामोनिशान मेटिन्छ भन्ने उनको रणनीति छ । यसैकारण एमसिसिमा प्रष्ट लाइन पनि नलिने र यसको कडा विरोध पनि नगर्ने विचको वाटो उनी लिइरहेका छन ।
७ कार्तिक १४:२२
मुख्यमन्त्री आचार्यले आजै विश्वासको मत लिने
५ कार्तिक १३:२४
प्रदेश इन्चार्ज नपाउने भएपछि भीम रावलको फरक प्रस्ताव (पुर्णपाठ)
५ कार्तिक २३:१२
खानेपानी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख जागेश्वरलाई सिके राउतका कार्यकर्ताले अर्धनग्न…
४ कार्तिक १५:०९